Rio 2016:Maryan Muse oo orodka 400m maanta gashay – Kasmo Newspaper
Rio 2016:Maryan Muse oo orodka 400m maanta gashay
Updated - August 13, 2016 6:31 pm GMT
Maryan Nuux Muuse oo Soomaaliya ku matalaysa Olimbikada Rio ayaa maanta ka qaybgashay orodka 400 oo mitir ee hablaha,iyada oo ay u tahay markii u horreysay,waxayna dad badan xasuusinaysaa muuqaal jiray 8 sano ka hor.
Waa xusuusta murugada leh ee Samiya Yusuf Cumar (Sawirka Hoose) oo Soomaaliya u matashay Olimbikadii Pekin,sannadkii 2008dii,orodka hablaha ee 200 oo mitir,markii dambana ku geeriyootay,2012kii,tahriibkii Badda Dhexe (Mediterranean sea).
Maryan oo 19 jir ah waxaa ay ku labisantahay isla funanaddii cirka u ekayd,waxayna leedahay qabkeedii,adkaysinkeedii,si kastana waa ugu egtahay,waxaana gacanta ku haya isla tababrihii Samiya oo ah Maxamed Nur.
Soomaaliya waxaa ay Olimbikada Rio uga qaybgalaysaa 2 nooc oo qur ah oo kala ah orodka 400 oo mitir ee hablaha iyo midka 5,000 oo mitir ee wiilasha,waxaana u kala ordaya Maryan iyo Maxamed Daa’uud Maxamed oo 20 jir ah oo Arbacada 17ka gali doona.
Dagaalladdii iyo burburkii ka dib,cayaartoydii Soomaaliya,sida bulshada inteeda kale,waxa ay u kala firxadeen dunida daafaheeda,nabadgalya-xumada ka sokowna,waxaa hadda ka maqan kaabayaashii iyo tababarradii soo saari lahaa cayaartoy taya leh. Maryan waxaa ay noqotay qofkii ugu dambeeyay 57ka qof ,iyada oo ku samaysay 1.20 daqiiqo.
Dhallinyaradani xitaa haddii ayan soo qaadin wax billad ah,waxaa ku fillaan doonta in ay ka mid ka noqdeen,colweynaha an guulaysan, (Army of the losers),sida caadada ah, ee ka soo qaybgalayaasha tartannada.